Maamulka Gobolka Banaadir Oo Xalay Xaflad Sagootin Ah U Sameeyay Hugaamiyaasha Maamul Goboleedyadda – Hornafrik Media Network
Maamulka Gobolka Banaadir Oo Xalay Xaflad Sagootin Ah U Sameeyay Hugaamiyaasha Maamul Goboleedyadda
By HornAfrik	 On Feb 12, 2018
Madaxda maam,ul gobaleedyada dalka ka jira marka laga reebo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaliya iyo reysal wasaaraha ayaa xaadir ku ahaa aqalka dowladda hoose ee xamar kuwaasi oo kasoo qeyb galay muinaasabada.
Gudoomiyaha gobalka banaadir ahna magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisoow ayaa sheegay in shirka amniga lagu go aamiyay in si wada jir ah loola dagaalamo burcada dhaceysa kheyraadka alle uu dhex dhigay badda soomaliya.
Madaxweynaah maamulka hirshablle maxmaed cabdi waare ayaa hoosta ka xariiqway in madaxda dalka iyo kuwa maamyl gobaleedyada ay qaadeen tilaabadii ugu horeysay oo ay kula qwareegayaan amniga guud ee dalka.
Madaxweynaah maamulka galmudug ahmed ducaale geeele xaaf ayaa carabaaabay in madaxda maamul gobaleedyada dalka ka jiraya ay ka go antahay inay isku furan dalka intiisa kale.
Madaxweynaha maamulka jubbland axmed maxmaed islaam madoobe ayaa tibaaxay in madaxdii kulanka amniga guud ku yeeshay muqdisho ay isla meel dhigeen aayaha dalkeena soomaliya kuwaasi oo keeni kara hormaar waara.
Reysal wasaraha xukuumadda soomaliya xasan cali khyere ayaa ka dalbaday shacabka soomaliyeeed inay kala shaqeeyaan hoirmnarinta dalka isagoona carabka ku dhuftay ruuxaan dooneyn hormarinta soomaliya uu ka daayo dowladda dhibaatada
Aqriso War Murtiyeedkii Laga Soosaray Shirkii Amniga Qaranka
Hugaamiyaha Jubaland Oo Sheegay in laqeexo maqaamka caasimadda dalka